စာအရေးအသားမြှင့်တင်ရေးတွင်သင်ခန်းစာ (၇) ခု | Martech Zone
၇။ သင်၏အရေးအသားတိုးတက်စေရန်သင်ခန်းစာ ၇
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 25, 2011 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
Jo-Anne Vandermeulen စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ် Marketing နည်းပညာဘလော့ဂ်ရေဒီယို ဒါပေမယ့်မိနစ် ၂၀ လောက်မှာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားပြီးပြပွဲကိုတော့မရပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ Jo-Anne ဆီကအကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရလာလို့စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
ဂျိုအန်းသည်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့်ပရိုမိုးရှင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ဆရာမအဖြစ်အနားယူပြီးနောက်သူသည်စာအုပ်များစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သူသည်စာပေများမြှင့်တင်ရေးကိုမည်သို့ကျွမ်းကျင်ရမည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည်ယခုသူမ၏စီးပွားရေးကိုအပ်နှံလိုက်ပြီဖြစ်သည် ဘလော့ဂ်တစ်ခုချင်းစီ podcast တခုကိုနှင့်သူမ၏စာရေးဆရာများသူတို့၏အရေးအသားမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးဖို့သူမ၏နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က Jo-Anne နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကောင်းပါတယ် Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging။ ထိုစာအုပ်သည်ပုံမှန်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ထိုစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်အချိန်တွင်မြှင့်တင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ကြောင်းဖြစ်သည်။ Jo-Anne ရဲ့အကြံပြုချက်တွေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအတူတကွငါထားခဲ့တယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည့်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်သင်၏စာအုပ်များကိုစျေးကွက်တင်ရန်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၌စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒီဂရီသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရန်ဆန္ဒမရှိသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချိန်နှင့်ခွန်အား - နှင့်ဗဟုသုတလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဘလော့တစ်ခုစတင်ခြင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာတင်ပြပါ၊ သင်၏ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ၊ သင်၏ပရိသတ်နှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုကြိုဆိုပါ။ သေချာတာပေါ့၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝယ်ယူရန်ခလုတ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နေသောလင့်ခ်များဖြင့်သင်၏စာအုပ် (များ) ကိုဘေးဘားတန်းတွင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်!
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိနေခြင်း အဓိကထိတွေ့မှုကိုရရှိရန်အတွက်တန်ဖိုးရှိသော faucet တစ်ခုဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Facebook တွင် ၁.၂ ဘီလီယံခန့်ရှိသောအသင်းဝင်များကိုပြောနေသည်။ ၎င်းသည်စာအုပ်လက်မှတ်ထိုးနေစဉ်အတွင်းဆက်သွယ်ရန်သင်အိပ်မက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ) သင်၏ပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီး၊ သင်နှင့်သင်၏စာအုပ်များကိုကွန်ယက်များများအများမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်အခွင့်အလမ်းများစွာအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးမည့်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးရန်အချိန်ဖြုန်းပါ။
သင်၏စာအုပ်တိုးမြှင့်ခြင်းသည်သင်စာအုပ်အတွက်အကြံဥာဏ်ရှိသည့်နေ့မှစတင်သည်။ သင်၏ပရိသတ်နှင့်အတူမျှော်လင့်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စာအုပ်တွေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ့်အချိန်အထိလူကြီးတွေ (ကျွန်တော်တို့အပါအ ၀ င်) များများစားစားစောင့်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ဒီတစ်ခုအပေါ်အချိန်နှင့်အရှိန်အဟုန်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရ! ကြိုတင်အမှာစာတွေတွန်းလှန်ပြီးမကြာခင်မှာဆိုဒ်တစ်ခုကိုဖွင့်ထားချင်ပါတယ်။
ဟောပြောသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဟောပြောသူချင်းအချို့သည်စာအုပ်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပြီးစာအုပ်များစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည် တက်ရောက်သူများအတွက်စာအုပ်များဝယ်ယူရန်တောင်းဆိုခြင်း တစ် ဦး စကားပြောအခကြေးငွေပေးဆောင်ထက်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာအဆင့်သုံးဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ စာအုပ်ကိုမင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမယ်၊ စာအုပ်တွေထပ်ရောင်းမယ်၊ စာဖတ်သူတွေကိုစာအုပ်ထုတ်ပြီးပြောမယ်။ အနိုင်ရ၊
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိစ္စ! ဤစာအုပ်မိတ္တူများကိုသင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအခြားအာဏာပိုင်များထံပေးပို့ပါ အမေဇုံအပေါ်သူတို့ရဲ့ရိုးသားတုံ့ပြန်ချက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတောင်းခံပါ နှင့်အခြားစာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်က်ဘ်ဆိုက်များ။ ဘလော့ဂ်များရှိသည့်အာဏာပိုင်များသည်သင်၏စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုမကြာခဏရေးသား။ ၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏စာဖတ်သူများကိုမြှင့်တင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်အဘို့, ငါတို့ရှိခဲ့ပါတယ် တောင်အာဖရိကမှဗီဒီယိုများအားလုံး အထိ eBay ၏ Blogger မှဓာတ်ပုံ, ရစ်ချတ်ဘရူ - ဟေ, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က! သင်၏စာဖတ်သူများသည်သင်နှင့်စာရေးသူအဖြစ်သင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုရှိလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်အခွင့်အရေးများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါထိုအားသာချက်ကိုယူပြီးတည်ဆောက်ရန်သေချာစေပါ။
Jo-Anne ၏စာအုပ်သစ်၊ စာရေးသူများအတွက်အထူးမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုသေချာကောက်ယူပါ။
25:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 28 မှာ
နံပါတ် ၅ ကငါ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိစေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘယ်တော့မှစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။